विराट मेडिकल कलेजमा पहिलो हिप ज्वाइन्ट प्रत्यारोपण सफल
विराटनगर, १३ मंसिर । गत सोमबार मंसिर ९ गते बिराट मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटलमा सफल हिप ज्वाइन्ट प्रत्यारोपण गरिएको छ । हस्पिटलमा कार्यरत हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा.अजय महतोद्वारा हिप ज्वाइन्ट प्रत्यारोपण गरिएको हो ।
निकै जटिल मानिने सर्जरीलाई नेपालको पूर्वाञ्चलमा त्यति विकसित नभएकोले धेरैजसो बिरामीहरू भारतलगायत अन्य देशहरूमा जान बाध्य थिए । तर, यहीँ सुबिधा भारतको दिल्लीस्थित एम्स हस्पिटलबाट विशेषज्ञता र फेलोसिप गरेका डा. अजय महतोद्वारा विराट मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटलमा सुरु गरिएको हो ।
हिप ज्वाइन्ट प्रत्यारोपणसँगै घुँडाको प्रत्यारोपण र दुरबिनद्वारा गरिने शल्यक्रिया पनि हस्पिटलमा सुरु भएको छ । दुई वर्षअगाडि ७० वर्षीय सप्तरी निवासी उमेशप्रसाद साहले धरानमा दुवै हिप ज्वाइन्ट एभिएन रोगले बिग्रिँदा दाहिने हिपको प्रत्यारोपण गराएपनि राम्ररी हिँड्न सकेका थिएनन् । देब्रे हिप पूर्णरुपले बिग्रेको र ज्वाइन्टमा खाल्डोसमेत भएकोले उनी वाकर र ब्हीलचेयरको साहारामा बस्न बाध्य भएका थिए ।
तर, अब देब्रे हिप ज्वाइन्ट प्रत्यारोपणपछि बिना साहारा हिँड्ने, बिनाकुनै दुखाइ जहाँ पनि जान सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हिप ज्वाइन्ट वा घुँडाको प्रत्यारोपण बुढेसकालमा हुने आस्टिआर्थिटिक वा कुनै रोग जस्तै टिबी, गाठीया, बाथरोग, एभिएनका कारण घुँडा र हिप ज्वाइन्ट बिग्रिन्छ र पूर्णरुपले बिग्रिँदा बिरामीलाई हिँड्दा दुख्ने, दुखाइको डरले घरबाट बाहिर निस्कन मन नलाग्ने, आफूले गर्ने नियमित काम गर्न नसक्ने हुँदा यस्ता बिरामीलाई घुँडा वा हिप ज्वाइन्टको प्रत्यारोपण गरी कृतिम जोडको आवश्यकता हुने डा. अजय महतोले बताउँछन् ।
उक्त जटिल शल्यक्रियामा डा. अजय महतोका साथ डा. मिथलेश गुप्ता, एनेशथेसिया विशेषज्ञ डा.कनक, शल्यक्रियामा संलग्न सम्पूर्ण टिमले साथ दिएका हुन् ।